Kamshaa Unkaa Too'atamtootaa bani sajoo Sanduuqa Makaacuqaasi yookin Sanduuqa Tarree cuqaasitti dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii Walindhaan Kuussaa deetaa Unka keessatti: Masaka - Fuula 2 argamuu qaba.
Dirreewwan gabatee mara fuula masaka duraanii irraa filaman mul'isa.
Dirree deetaan isaa sanduuqota makaa ykn tarree keessatti mul'atu ifteessa.
Maqaan dirree asitti kenname Amaloota too'annoo keessatti akka maalimaa hima SQL dirreeQabeentoota Tarree keessatti argama.
Title is: Masakaa Sanduuqa Makaa/Tarree: Filannoo Dirree